Ny hetsika atao miaraka amin'ny hafanam-po dia manidy ny fetin'ny fizahan-tany amin'ity taona ity
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Ny hetsika atao miaraka amin'ny hafanam-po dia manidy ny fetin'ny fizahan-tany amin'ity taona ity
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • tompon'andraikitra • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia
Famaranana ny Fetiben'ny fizahan-tany any Seychelles
Ny famaranana ny fankalazana ny Fetiben'ny Fizahan-tany tamin'ity taona ity dia nanatevin-daharana ny ekipan'ny Ecosystem Base Adaptation (EBA) ho an'ny hetsika fambolen-kazo ny asabotsy 2 Oktobra 2021 tao amin'ny "Dan Sours" ao Val Den D'or, Baie Lazare.
Naneho ny hafanam-pony sy ny hafanam-pony ireo ankizy mpianatra satria nanampy ny ekipa roa hamboly karazan-jaza 200 sahady izy ireo, rehefa niatrika oram-batravatra.
Nanapa-kevitra ny sampana fa hampiditra tanora mpikambana ao amin'ny fiarahamonina mba ho anisan'ilay hetsika misy fiatraikany.
Mampiseho ny fahavononan'ny departemanta handray andraikitra hanodina ny famoahana gazy karbonika ateraky ny hetsika fizahan-tany ny hetsika.
Nanamafy ny fahavitrihany sy ny hamafin'izy ireo ny mpianatra satria nanamafy orina ny oram-batravatra dia nanampy ny ekipa roa izy ireo mamboly karazan-jaza 200 ao anatin'izany ny "lantannyen fey," "lantannyen milpat," "lantannyen lat," "Sandel," "vakwa," ary "lafous" ao amin'ny tranokala EBA.
Notarihin'izy ireo ny Seychelles Ny minisitry ny raharaham-bahiny sy ny fizahan-tany, Sylvestre Radegonde, ny sekretera lehiben'ny fizahan-tany, Ramatoa Sherin Francis, ny Tale jeneralin'ny tanjona amin'ny marketing, Rtoa Bernadette Willemin, ary ny Tale jeneralin'ny fitantanan-draharaha sy ny Human Resource, Ramatoa Jenifer Sinon.
Nandritra io hetsika io dia nanambara ny minisitry ny fizahantany fa mifanaraka amin'ny lohahevitra nasionaly amin'ity festival ity dia nanapa-kevitra ny hampiditra tanora mpikambana ao amin'ny fiarahamonina ho anisan'ny hetsika misy fiatraikany.
“Ny ankizy no hoavin'ny indostria sy ny firenentsika. Zava-dehibe ho anay ny nampiditra azy ireo tamin'ireo hetsika isan-karazany amin'ny festival. Faly be aho nahita ny hafanam-pon'izy ireo manampy anay handavaka sy hamboly. Lesona lehibe sy loharanon'ny aingam-panahy ho antsika rehetra nanatrika ny 'Dan Sours,' ”hoy izy.
Raha niresaka mivantana tamin'ny radio teo an-toerana “Radyo Sesel”, Ramatoa Francis dia nilaza fa ny hetsika dia maneho ny fahavononan'ny departemanta handray fepetra hanodinana ny famoahana gazy karbonika ateraky ny hetsika fizahan-tany.
“Ny tontolo iainantsika dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny alehantsika. Ny hatsaran'ny nosintsika miankina amin'ny hetsika ataontsika hikarakarana azy io. Izany no antony mampiditra ny hetsika fanadiovana hatrany mandritra ny Fetiben'ny Fizahan-tany. Amin'ny maha-fikambanana anay dia tapa-kevitra ny handeha amin'ny lahateny izahay ary tamin'ity taona ity dia nanampy ny hetsika fambolen-kazo izahay hanamafisana ny fanoloran-tenantsika amin'ny fanodinana ny entona entona ary ny fitehirizana ny tontolo iainana.
Ny hetsika fambolen-kazo dia nanidy ny fetiben'ny fizahan-tany tamin'ny 2021 izay natao tamin'ny lohahevitra "mamolavola ny ho avy. '